UTerje Vigen, umbongo ongaziwayo kaHenrik Ibsen | Uncwadi lwangoku
Ifoto: Del Grimstad Adressetidende. Umdlali weqonga waseNorway kunye nomlawuli uTrond Espen Seim nge-4 ka-Agasti ophelileyo emva kokufunda uTerje Vigen kwiintsuku ze-Ibsen-Hamsun ezibanjelwe eGrimstad.
Kwaye ithathelwe ingqalelo phantse njengoDon Quixote kwilizwe laseNordic ukusuka apho UHenrik Ibsen Ngaphandle kwamathandabuzo umbhali wayo obalaseleyo kunye nomnye wababhali baseNorway. Ku-Agasti ophelileyo iintsuku ze-Ibsen kunye neHamsun zenzeka, apho, njengesiqhelo, i UTerje Vigen, umbongo obalisayo, ayaziwa kumfundi oqhelekileyo, onenye yazo amabali ayindumasi ophambili kuye intsomi yesizwe. Ke ndimsondeza kwisihlwele kwaye ndihambahamba nge-Ibsen.
1 UHenrik Ibsen
2 UTerje Vigen
Uzalelwe ngaphakathi Iskien Ngomnyaka we-1828, u-Ibsen, umbhali wemidlalo waseNorway kunye nomlobi, ungomnye wabalobi abanempembelelo kwimeko yanamhlanje. Lakhe ICasa de muñecas, kunye ne-protagonist yayo UNora, yenye yezona zaziwa kakhulu ngalo lonke ixesha kwaye uninzi lwezi ntsuku ngezityholo zalo zobufazi. Eminye imisebenzi eyaziwayo yile uhlobo, Oontanga Gynt o UHedda Gabler.
Eyona nto iphambili ekuboniseni umdlalo weqonga wangoku, yaqwalaselwa imisebenzi yakhe ihlazo kuluntu lwe amaxabiso ama-victorian woyisa, njengoko wayebabuza ngokuphandle. Kananjalo abaphulukananga nokusebenza kwabo ngokuhamba kwexesha kwaye ziyaqhubeka ukwenziwa rhoqo. Ngaphandle kokuya phambili Iqonga leSizwe U-Oslo ubhiyozela okulandelayo Umthendeleko we-Ibsen ukusuka kwi-8 ukuya kwi-19 yale nyanga.
Umsebenzi we-Ibsen kunye nomsebenzi wemibongo awaziwa ujikeleze la malungu, kodwa athandwa kakhulu kumazwe aseNordic. Ukusuka UTerje Vigen ngakumbi, kodwa neminye imibongo yakhe, kuthiwa baye baba luhlobo lokudityaniswa olufundwa ngabantwana kufutshane apha Quixote.
UTerje Vigen Ngumbongo oyindumasi ngu Izitanza ezingama-52 ukuba Ibsen yapapashwa ngo 1882. Ibalisa ibali elibalaseleyo lendoda, umatiloshe okhaliphileyo nongoyikiyo ukuba, kwi iimfazwe ze-napoleonic, ngexesha lokuvalwa kwesiNgesi eNorway kwi 1809, kunye neyakhe Usapho lusecicini lokufa Ngenxa yendlala, wakhwela iphenyane ukusuka eMandal esiya eDenmark ukuzisa irhasi.
Lo mbongo wenziwa ukusukela ngoko ukulungelelaniswa kwefilimu a zomculo.
Ngesihloko ekubhekiswa kuso imigca emibini yokuqala ukusuka kumbongo "Kwakudala kwakukho indoda endala kwisiqithi esingumqwebedu," ifilimu (Kwakukho Indodalulungelelwaniso lwaseSweden, olwefayile ye- Imuvi ethe cwaka, owadubula kwaye wadlala inkwenkwezi UVictor Sjöström ngo-1917. Kwimizuzu engama-60 sibona ibali likaTerje Vigen, umlobi weentlanzi ohlala nenkosikazi yakhe (uBergliot Husberg) kunye nentombi yabo kwilali ekunxweme olusemazantsi eNorway.
En 1809, ngenxa yokuvalwa kwelizwekazi nguNapoleon nxamnye neNgilane, igosa lomkhosi liza kule lali ukuzokuxela awukwazi ukuloba kumgama othile kunxweme okanye usondele eJutland engummelwane. Ukuthintela oku, uTerje Vigen unikezelwe yokuqhawula imithwalo kunye nonxweme lwaseDenmark. Nangona kunjalo, kolunye lolo hambo ugqibela ngokufumanisa indlela ye- inqanawa yesingesi athe wakwazi ukuyiphepha ekuqaleni. Ithamsanqa elibi liyayifuna loo nto, kwixesha elizayo nasemva kokuleqana, uTerje Vigen ukubanjwa.
Ukusa kwinqanawa, uya kusiwa kwifayile ye- intolongo IsiNgesi apho siza kubakho de kube li-1815. Xa ebuyela ku ilali yakhe, uyifumana yonke into itshintshile. Abanye abamelwane abamazi nokuba xa efika ekhaya, ufunda kwisibini esitshatileyo esihlala kuloo nto umfazi kunye nentombi yakhe encinci babulawa yindlala. Ingcamango yakhe kukuba uyawa kwaye kamva, edangele, waya emangcwabeni ukuze abone amangcwaba abo.
Ukuqhubela phambili nangona ungenzelwanga, fumana omnye umsebenzi njengomqhubi wenqwelomoya yamaphenyane, kodwa kancinci kancinci bayathatha inzondo, inzondo kunye nomnqweno wokuziphindezela. Ngenye imini abantu belali babona a isikhephe imalunga noku shona. UTerje Vigen, ngaphandle kweminyaka yakhe kodwa enkosi kubuchule bakhe, uzimisele ukunceda abo bakhwele enqanaweni. Kodwa emva koko qaphela umphathi weNgesi owambambayo wamthumela entolongweni.
Ukuzilahla kunye nomnqweno wokuziphindezela kumkhokelela ekubeni ayalele oomatiloshe ukuba bayishiye inqanawa, ngelixa unyanzela umphathi, inkosikazi yakhe kunye nentombi yakhe ukuba bangene kwesakhe isikhephe ukuze batshone. Intiyo engaboniyo iyenza bamba intombazana ngenjongo yokuyibulalakodwa emjonge ebusweni, ukhumbula eyakhe intombi kwaye ubuntu bakhe obudala buvela kwakhona unobubele. Wothukile yilento ebeza kuyenza kwaye ubabeka ngokukhuselekileyo kumatye athile de abanye abantu balapho babaqokelele bonke babase elalini.
Ekugqibeleni, esi sibini kunye nentombi yabo baya endlwini kaTerje Vigen ukuya enkosi ngokobuqu kwaye bayemka ngelixa ebandulula.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » UTerje Vigen, umbongo ongaziwayo kaHenrik Ibsen